एमाले पार्टीले निलम्बन गरे पछि यसरी रोए माधवकुमार नेपाल ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/एमाले पार्टीले निलम्बन गरे पछि यसरी रोए माधवकुमार नेपाल !
ओलीलाई मलाई हटाउने कुनै अधिकार छैन। यस बारेमा मलाई जानकारी पनि छैन’ नेता नेपालले भने,‘ओली एमालेको अध्यक्ष नै होइनन्।’ ओली अहिले सिंगो पार्टीको नभइ गुटको अध्यक्ष भएको भन्दै नेपालले ओलीले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने दाबी गरे। केन्द्रीय कमिटी नै विघटन गरेका व्यक्तिले कारबाहीको हल्ला फैलाउनुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाई छ।
गुटको अध्यक्षले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले कारबाही वा निलम्बनको कुनै अर्थ नहुने नेपालले लेखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए